Igumbi Elipholile Elithulile - Indawo Ephephile - Ukufinyelela Okulula kwe-I-270 - I-Airbnb
Igumbi Elipholile Elithulile - Indawo Ephephile - Ukufinyelela Okulula kwe-I-270
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Starr
U-Starr Ungumbungazi ovelele
Ukufinyelela kalula ku-I-270. Ngaphansi kwamamayela ayi-10 ukusuka e-Easton Town Center (Easton, Columbus, OH); I-Polaris; I-Hoover Reservoir Ipaki-ukugijima, ukuhamba, ukuhamba izintaba nezindlela zokuhamba ngebhayisikili; kanye namamayela angaphansi kwe-15 ukusuka edolobheni laseColumbus, Airport, Ohio Expo Center, & fairgrounds. Izindawo zokudlela, izitolo zekhofi negrosa phakathi kwe-1 mi. Umgwaqo ofile othulile ekuthuthukisweni kwe-Sunbury Woods, e-Westerville, elokishini laseBlendon.
Sicela ufunde uhlu olugcwele futhi ukhululeke ukungithumelela umlayezo nganoma imiphi imibuzo noma izinkathazo.
Lesi sikhala sisezingeni eliphansi futhi sihlukaniswa nendawo yokuhlala enkulu ephezulu ngekhethini; bona izithombe. Lesi sikhala siqukethe nendawo yehhovisi ozokwazi ukungena kuyo.
I-TV ene- I-Amazon Prime Video, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.93 · 160 okushiwo abanye
Indawo ehlala kuyo iyisaga sokuthuthukiswa kwezindlu, ngaphandle kokukodwa okuhle - ungaba semgwaqweni ohamba phambili ngemizuzu emibili nje ngokukhanya okukodwa nje. Kuyiphupho labagibeli! Indlu iku-cul-de-sac enendawo yokupaka ezinhlangothini zombili zomgwaqo.
Ngicela ungazise uma kukhona engingakwenza ukuze ngenze ukuhlala kwakho kukhululeke kakhudlwana. Ngiyayibonga impendulo yakho njengoba ngifuna ukwenza isikhala samukeleke futhi sisebenzele wena nezivakashi ezizayo. Ngisebenza endaweni eyimayela ukusuka lapho engihlala khona, ngakho-ke, ngiyakwazi ukuhlangana nawe nganoma yisiphi isikhathi, uma kudingeka.
Ngicela ungazise uma kukhona engingakwenza ukuze ngenze ukuhlala kwakho kukhululeke kakhudlwana. Ngiyayibonga impendulo yakho njengoba ngifuna ukwenza isikhala samukeleke futhi sis…
UStarr Ungumbungazi ovelele